२१ मार्केटिंग सर्तहरू तपाईंको साथीहरूलाई प्रभावित / रिसाउन Martech Zone
बुधवार, अगस्त 17, 2011 बुधबार, डिसेम्बर 12, 2012 Douglas Karr
म आज राती घरमा केही पढिरहेको कुरा समात्दै घरमा बसिरहेको थिएँ। म एक साधारण साधारण मान्छे हो त्यसैले जब म केही नयाँ शव्दहरू छुन्छु, म अक्सर विकिपेडियामा क्लिक गर्छु हेक मैले पढिरहेको छु भनेर पत्ता लगाउनको लागि। म त्यहाँ पनि वर्षहरुमा उठिरहेको छु ... त्यसैले यो के हो पढे पछि, म मेरा आँखा घुमाउँछु र पढ्न फिर्ता जान्छु।
मैले मेरा आँखा घुमाउनुको कारण यो हो कि लेखकहरू (विशेष रूपमा मार्केटिaलेखकहरू) सँधै हामीलाई नयाँ शब्दहरू आविष्कार गर्न बाध्य महसुस गर्छन् जुन हामी सिक्न र पुरानो, बोरिंग शब्दहरू बदल्नको लागि हो। मलाई लाग्छ कि यसले उनीहरूलाई चलाख महसुस गराउँदछ जब हामी अयोग्यताको लागि पछि हट्छौं।
यहाँ केहि सर्तहरू छन्:
सशुल्क मिडिया - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं विज्ञापन.
कमाईएको मिडिया - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं मुखको कुरा.
स्वामित्व मिडिया - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं सार्वजनिक सम्बन्ध.
यातायात - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं परिसंचरण or अवलोकन.
गेमिङ - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं इनाम, वफादारी, बैज or पोइन्ट सिस्टमहरू। केटा स्काउट ब्याजहरू १ 1930 .० तिर छन्, यो नयाँ मान्छेहरू होइनन्।
मंगनी - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं पढ्ने, सुन्दैवा दृश्य (र पछि ... टिप्पणी गर्ने)
सामग्री मार्केटिङ - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं लेखन.
कल-टु-एक्शन - हामी यसलाई एक ब्यानर विज्ञापन कल गर्न प्रयोग गर्थे। केवल यो हाम्रो आफ्नै साइटमा भएकोले यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई नयाँ नाम चाहिएको थियो।
प्रवेग - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं पदोन्नति.
ग्राफ - (उदाहरणका लागि सामाजिक ग्राफ) हामी केवल यसलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गर्थ्यौं सम्बन्धहरु.
प्राधिकरण - हामी त्यो कल गर्थ्यौं लोकप्रियता.
अनुकूलन - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं सुधार.
क्युरेसन - हामी यसलाई कल गर्थ्यौं आयोजन.
स्कोरकार्डहरू - हामी यिनीहरूलाई कल गर्थ्यौं ड्यासबोर्डहरू.
विश्लेषण - हामी यिनीहरूलाई कल गर्थ्यौं रिपोर्ट.
अपडेट गरिएको: मान्छे - हामी यिनीहरूलाई कल गर्थ्यौं खण्डहरू ब्यवहारिक वा डेमोग्राफिक प्रोफाइलमा आधारित जुन डेटा प्रदायकहरूले विकास गरेका छन्।
Infographics - हामी यिनीहरूलाई कल गर्थ्यौं चित्रहरुकहिलेकाँही डाटा चित्रणवा पोस्टर। हामी हाम्रो क्युबिकहरू (एर .. वर्कस्टेशन) मा शान्त थियौं।
शब्दशब्द - हामी तिनीहरूलाई कल गर्थ्यौं शब्दहरु.
Whitepaper - हामीले भर्खर तीलाई बोलायौं कागजातहरू। तिनीहरू केवल सेतामा आए।
मानवीकरण - हामीले त्यसलाई केहि पनि कल गरेनौं .. हामीले फोन वा ढोका आफैंमा उत्तर दिनुपर्दछ।
थपियो: प्रस Marketing्ग मार्केटिंग - हामी यस गतिशील वा लक्षित सामग्री कल गर्न प्रयोग गर्थे।
त्यहाँ केहि अन्य महान शब्दहरू छन्, पनि… हाइब्रिड, फ्यूजन, वेग, लोकतान्त्रिकरण, क्रस-च्यानल, टेम्पलेटाइज, एकत्रीकरण, सिन्डिकेशन, एक्सेलेरन ...
यी केटाहरूले Google+ फिर्ता फिर्ता लिनु आवश्यक छ, केही निद्रा लिनुहोस्, र यसलाई वास्तवमा हामी याद राख्ने grade औं कक्षाको शब्दावलीमा यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। किन मानिसहरुलाई सँधै परिवर्तनको आवश्यकता छ? सायद यसलाई कुनै नयाँ कुरा भन्नुको मतलब यो हो कि हामी केहि विकसित भएको छ? (मैले यो किनेको छैन, हैन?)।
मलाई लाग्छ प्राय जसो कम्पनीहरू अझै सरल ब्रान्डि withको साथ संघर्ष गर्दछन् वा एक क्रिप्पी वेबसाइटबाट स्नातक हुन्छन्, कुनै आपत्ति छैन हाइब्रिड त्वरित अर्जित मिडिया अभियान जसको वेग मानवीय सment्लग्नता द्वारा विस्तार गरिएको छ.
सबै ईमानदारी मा, म पनि म दोषी छ, लाग्छ। मसँग एउटा ... छ नयाँ मिडिया एजेन्सी, एक मार्केटिंग फर्म होईन। यो वास्तवमै एक को अधिक हो इनबाउन्ड मार्केटिंग एजेन्सी… तर म जुवा खेल्छु कि सधैं हुन्छ नयाँ मिडियातर इनबाउन्ड केहि बेवकूफ नयाँ पद जस्तै प्रतिस्थापन हुन सक्छ तीव्र.
तपाईलाई थाहा छ, यसको विपरितको रूपमा बाधा.
टैग: त्वरणविश्लेषणअख्तियारकार्यलाई कल गर्नुहोस्सामग्री मार्केटिङसन्दर्भ बजारcurationकमाएको मिडियामंगनीgamificationग्राफमानविकीमार्केटिंग इन्फोग्राफिक्सअनुकूलनस्वामित्व मिडियासशुल्क मिडियामान्छेस्कोरकार्डहरूयातायातशब्दावलीWhitepaper
ईनबक्समा तपाईंको ईमेल प्राप्त गर्दै
अगस्ट 18, 2011 मा 4: 21 AM
मैले सोचे बाहेक "सामग्री मार्केटिंग" "लेखन बेच्ने" थियो। वा अझ विशेष रूपमा "सामानहरू बेच्दै जुन पहिले नै लेखिएको थियो।"
म यो स्वीकार गर्न घृणा गर्छु, तर मैले यी मध्ये कम्तिमा7प्रयोग गरेको छु 1) यसको बारेमा सोच्न वा 2) पूर्ण रूपमा सीधा अनुहारको साथ।
अगस्ट 18, 2011 बेलुका 2:02 बजे
एरिक - म तिनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्दछु! दुर्भाग्यवश, हामीले भर्खरको शब्दावलीको साथ राख्न र यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ। नत्र हामी विकसित नभएको जस्तो देखिन्छौं!
अगस्ट 18, 2011 मा 9: 24 AM
यस लेखले मलाई मुस्कान बनायो, यी सर्तहरू मध्ये केही वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ र केही होइन... अझै! विभाजन र बजार खण्डहरू सधैं मार्केटिङ शब्द हो निश्चित रूपमा .. पक्कै पनि एक जुन मैले विगत 20 वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको छु!
अगस्ट 18, 2011 बेलुका 2:07 बजे
मलाई याद छ जब व्यवहार प्रकारहरू आविष्कार गरिएको थियो र हामीले केवल "क्वेरीहरू" गर्यौं र ती 'प्रकारहरू' मा अभियानहरूलाई अनुकूलित गर्यौं। मैले त्यसबेला यसलाई विभाजन भनिएको सम्झिन सक्दिन - यद्यपि यो वरपर भएको हुन सक्छ! त्यसपछि पछि हामीले तिनीहरूलाई "व्यक्तिहरू" भन्यौं... सायद त्यो सूचीमा राख्नु राम्रो हुन्थ्यो!
अगस्ट 18, 2011 बेलुका 2:15 बजे
मलाई तपाईंको टिप्पणी एकदम मनपर्‍यो, मैले यसलाई पाउला अपडेट गरे!
अगस्ट 18, 2011 बेलुका 2:54 बजे
धन्यवाद डगलस, नयाँ सूचीमा मेरो मनपर्ने लोकप्रियताको स्थानमा प्राधिकरण हुनुपर्छ, केवल ज्ञानको गहिराइको पूर्ण नयाँ अर्थ दिन्छ, जुन पक्कै पनि हुन सक्छ वा नहुन सक्छ, तर राम्रो लाग्दछ! 🙂
अगस्ट 23, 2011 बेलुका 2:48 बजे
रोजगार खोजलाई मार्केटिङ अभियानको रूपमा हेरिन्छ, जागिरको लागि आवेदन नगरी। मैले "व्यक्तिगत ब्रान्डिङ" देखेको छैन जुन सम्भावित जागिर उम्मेद्वारलाई सन्दर्भ गर्दा "योग्यता" भनिन्थ्यो। आज सबैसँग "ब्रान्ड" छ जुन तिनीहरूको "पहिचान" वा "मुख्य सीपहरू" वा "शीर्ष शक्तिहरू" हुन्थ्यो। ओह, अर्को एउटा "मार्केटिंग कागजातहरू" हो जसलाई पहिले रिजुमे भनिन्छ वा बायोलाई अब "[अनलाइन] प्रोफाइल" भनिन्छ। एक "काम" एक "अवसर" हो र "समस्या" एक "चुनौती" हो। "कर्मचारी" लाई "मानव संसाधन" मा रूपान्तरण गरियो जुन "प्रतिभा प्राप्ति" मा परिणत भयो। र यसरी जान्छ ....
अगस्ट 24, 2011 बेलुका 3:28 बजे
राम्रो टुक्रा। म कसैलाई शब्दावलीबाट “लिभरेज” निकालेको हेर्न चाहन्छु!
अगस्ट 24, 2011 बेलुका 5:40 बजे
हे मानिस! लाभ उठाउनु मेरो मनपर्ने मध्ये एक हो। 🙂
लाना खोज - अनुसन्धान
अगस्ट 24, 2011 बेलुका 5:09 बजे
यो हास्यास्पद छ र धेरै मामिलामा धेरै सत्य छ! तर मलाई लाग्छ कि मार्केटरहरूले उनीहरूको ग्राहकहरू र "सामान्य मार्केटिङ पब्लिक" द्वारा बुझ्न सक्ने भाषामा बोल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो एक आधुनिक सिग्नल प्रणाली जस्तै छ।
अगस्ट 24, 2011 बेलुका 5:41 बजे
मलाई आशा छ लाना! मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ हामीले यी सर्तहरू प्रयोग गर्छौं र यो अलि डरलाग्दो छ!
सेप्टेम्बर 1, 2011 बेलुका 4:40 बजे
म हिजो एक एजेन्टसँग भेट्दै थिएँ जसलाई ब्लगिङ र अनलाइन मार्केटिङमा रुचि छ। उनले मलाई भनिन् कि म उसको ब्लग साइट सेटअप गर्ने मानिसहरू जस्तै बोल्छु। मेरो वास्तविक जुनून कहाँ छ भनेर सोच्न मलाई जानुहोस् ... मार्केटिङ। मलाई लाग्छ कि मार्केटिङ सम्बन्धित विषयहरूमा यति धेरै जानकारी पढेपछि, तपाईंले यसलाई ध्यान नदिई शब्दावली उठाउनुहुन्छ।
र यहाँ मैले "curation" शब्द चार अक्षरको शब्द हो भनी सोचे। म सच्याउँछु 😉
यो लेख मजा आयो।
उत्कृष्ट लेख र विकास गर्न 'आवश्यक' सोच्ने मानिसहरूको बारेमा यति सत्य। यस्तो देखिन्छ कि यो मानिसहरूको प्रकृतिमा सबै कुरा नयाँ र सुधारिएको संग नवीनता सम्बन्धित छ - स्पष्ट रूपमा यसमा शब्दावली समावेश छ। सोसलमिडिया टुडेको एक लेखद्वारा सूचीबद्ध गरिएको अर्को राम्रो थियो "सिनर्जी" अब "टिमवर्क" लाई प्रतिस्थापन गर्दै। (http://socialmediatoday.com/node/397449&utm_source=feedburner_twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=autotweets)
अगस्ट 25, 2012 मा 10: 28 AM
प्रत्येक तेस्रो वाक्यमा 'विभाजन' शब्द प्रयोग गर्न मनपर्ने बाटोहरू पार गर्ने एक ब्लोहार्ड सल्लाहकार। 'त्यसपछि हामीले तिनीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गर्यौं' भन्न सकिँदैन। मानिसहरूले तपाईंलाई नबुझ्दा तपाईंले बढी शुल्क लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।
म 'कल टु एक्शन' को साथ मुद्दा लिनेछु। मसँग 1920 को प्रतिलिपि लेख्ने पुस्तकहरू छन् जसमा कार्य गर्न बाध्यकारी कलहरू सिर्जना गर्न समर्पित अध्यायहरू छन्। 'ब्यानर विज्ञापन' को पर्यायवाची रूपमा प्रयोग गर्ने जो कोहीसँग गम्भीर मार्केटिङ पृष्ठभूमि छैन।